Sidee si ay u gudbiyaan Pictures ka iPhone in Flash Drive
waxaan si toos ah taleefan oo kaliya bedeli karaa flash drive, sababtoo ah iPhone ma taageeri xiriir la leh USD disk, haddii aad u baahan tahay si ay u soo diraan in ay aad flash sida dib ka hor inta aadan u cusboonaynta nidaamka hawl gal, si ay ula kuwa aad jeceshahay wadaagaan sawiro aad, ama aad doonaya in ay lacag la'aan ah ilaa aad boos, waxaa jira habab fudud oo u baahan xoogaa tallaabooyin ah si aad u samaysay shaqada. taas oo ah, in aad sidoo kale iibsiga si aad u computer hore ka dibna si aad flash drive ama aad ku wareejin kartaa in aad flash drive si toos ah karaan.
Qaybta 1. Siyaabaha sawiro ka iPhone wareejiyo computer
Qaybta 2. Markaas sawiro ka PC wareejiyo si aad flash drive
la TunesGo Retro Qaybta 3. Transfer in aad flash la wado toosan.
Qeybta 1: Siyaabaha sawiro ka iPhone wareejiyo computer
Qeybta 2: Ka dibna sawiro ka PC wareejiyo si aad flash drive
Connect aad flash drive si aad u computer hubinta in flash uu leeyahay meel ku filan sawiro aad rabto inaad ka soo dhoofsadaan.
Fur aad flash drive. Xaqa guji qaybta cad ee suuqa kala dooro koollada si ay u dajiyaan oo dhan sawirada aad soo guuriyeen ka PC
Qeybta 3: sawiro Transfer ka iPhone u iftiimiyo si toos ah u kaxayn la TunesGo Retro
TuneGo Retro , nuqul ka photos, music, playlists, videos ka iPod, iPhone & iPad in Lugood iyo in aad PC u gurmad. TuneGo Retro waxaa filaayo in ay la jaan qaada iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 5, 5c iPhone, Iphone 5S, iPhone 6 Plus iyo iPhone 6, haddii ay ordaya macruufka 5, 6, 7, 8.
xiriiriyaan flash drive in computer ka, waxayna ku xiran tahay software-ka hawlgalka aad isticmaasho, daaqado u soo bixi doona hawlgallada "My Computer" halka Mac Kombiyuutaro flash drive USB muuqan doonaa on desktop. Double guji TuneGo Retro si ha u ordaan on your computer, markaas xiriiriyaan iPhone in your computer iyadoo la isticmaalayo cable iPhone Timid telefoonka. Marka kor ku xusan ee la sameeyey si guul ah, TuneGo Retro ogaan doonaa iPhone oo ka muuqan doona in ay carmal hoose
xiriiriyaan flash drive in kombiyuutarka
in la hubiyo flash ku leh xasuus ku filan sawiro aad rabto in lagu wareejiyo. Sida laga rabo, baarista flash u fayrusyada si aad u ilaaliso PC.
sawiro ka iPhone wareejiyo iftiimiyo drive
Marka aad telefoonka waxaa muujinaya on dariishaddii TunesGo Retro, iyo flash drive xiran yahay si aad u computer, dooro "Sawiro", taas oo ah bidixda ee TuneGo Retro uu furmo suuqa ugu weyn. IPhone socda macruufka 5 ilaa 8 ayaa sawiro badbaadi doona galalka, "Roll Camera" iyo "Photo Library". In kaas oo "ku giringiriya Camera" dukaamada photos ood isticmaalaya telefoonka halka "Photo Library" dukaamada photos in aad synced doonaa Lugood, haddii aad abuuray galalka shakhsi ah ee aad taleefan, sidoo kale waxa ay halkan ka muuqan doontaa. Marka aad gujisid mid ka mid ah fayl (kuwaas oo lagaga wada hadlay kor) photos, sawiro galka muuqan doonaa. Waxaad dooran kartaa folder ama sawiro aad u baahan tahay si ay u gudbiyaan si aad flash drive, ka dibna riix "Dhoofinta in" doorasho oo la arki karo oo ku saabsan bar ugu sareeya. Suuqa kala pop-up A muuqan doonaa, xulo USB flash drive oo guji in si furo waxaad badbaadin kartaa sawiro ku.
Baro Sida loo Bedelka iPhone Photos in Flash Drive
> Resource > iPhone > Sidee si ay u gudbiyaan Pictures ka iPhone in Flash Drive